Linux vs Windows. Basic misiyano | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Linux vs. Windows, Zvimwe Linux, Windows
Pachagara paine hondo pakati pezvakanaka nezvakaipa, pakati Windows y Linux. Ndiani akanaka uye ndiani akaipa? Windows iri nyore here kupfuura Linux? Kana hazvina kunyanya?
Tichataura nezve misiyano yekutanga iripo pakati peLinux neWindows uye kubva ipapo tinogona kuenda kunovakira hwaro kuti tiwane zvedu mhedziso.
Kuisa iyo inoshanda sisitimu ...
Kuisa Linux iwe unofanirwa kuita zvinoenderana nekuedza, kunyangwe nguva imwe neimwe iri basa riri nyore, asi iwe unogona kunyatsogadzirisa iyo yekumisikidza.
Panguva yekuisa Windows haugone kumisikidza chero chinhu (zvinhu zvina zvakakosha). Ehezve, kuiswa kwe Windows zviri nyore kwazvo uye zvakasununguka.
Hardware kugarisana ...
Windows inowanzoenderana nemhando dzese dze Hardware , que Linux. Nekudaro, imwe neimwe nguva ivo pavanenge vachiswedera padyo kuzere kuenderana, izvo zvingave zvinodikanwa.
Kutenda ku Linux inofarira mukurumbira wepamusoro, inopa kuenderana kwakanyanya kunyangwe isiri kumashure kweimwe imba yekutengesa. Inopawo inogadziridza kazhinji.
Windows chikamu che Microsoft, uye nekuda kwesimba rayo guru rehupfumi rinoedza kupa huwandu hwakakwira hwe vatyairi, sezvo makambani e Hardware vagadzire zvavo vatyairi.
Ngatitaurei nezveSoftware ...
Linux ane zvishoma Software mune mamwe matunhu, uye ane kugamuchirwa kushoma mubhizinesi renyika, kunyangwe nekuda kwekutsigirwa nemakambani akadai se Sun Microsystems (yakawanikwa muna 2009 naOracle) kana IBM kufambira mberi kwakakosha kwakaitwa munguva dzichangopfuura.
Windows muridzi wezvakawanda Software, sezvo iri iyo operating system yakanyanya kushandiswa mumakambani (kunyanya kuitira nyore kushandisa) uye izvi zvinoita kuti vanogadzira vatarise zvakanyanya pairi.
Linux Yakagara ichizivikanwa nekusimba kwehurongwa hwayo, nekuti semuenzaniso tinogona kupedza mwedzi (kunyangwe makore) pasina chikonzero chekudzima kana kutangazve komputa. Kune rimwe divi, kana chikumbiro chikapunzika, komputa haina kuparara zvachose.
En Windows nguva dzose (munguva pfupi kana inotevera) zvinodikanwa kuti utangezve sisitimu kana chero gadziriso yesystem yashandurwa kana kuvandudzwa Uye zvakare, inogona kuvharirwa kana ichiita kumwe kushanda kuri nyore, zvichitimanikidza kutangidza komputa.
Tanto Windows Chemhondoro Linux vane zvazvakanakira nekukanganisa, iwe unowana zvikonzero zvekushandisa (kana kusashandisa) zvese imwe uye imwe. Icho chiri chechokwadi ndechekuti kutaura kwehunyanzvi, Linux inobuda ichikunda.
Uye iwe unofunga here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux vs Windows. Misiyano yekutanga
Wow! Ndiri kuziva kusimba kweGNU / Linux, asi ini ndingadai ndisina kumbofungidzira kuti iwe unogona kuwana nguva dzegadziriro yegore @ _ @!
Ndiri kuzosiya komputa yangu iriko kusvikira apocalypse yadzima muna 2010;)
Zvakanaka kutumira! Kwaziwai!
Zuva Microsystems. Izvi zvinoita hwema hwekare. Pakati pezvimwe zvinhu, rarama kwenguva refu Linux.
Doc Brown akadaro
Daioms, chinzvimbo chidiki chakawedzerwa pachinhu icho.
Pindura Doc Brown
Hmm ... misiyano iyi ndeye kubva muzana ramakore rapfuura, kana kutanga kwemakore gumi apfuura
Nezve iyo yekumisikidza, mazuva ano zviri nyore kuisa chero chero GNU / Linux distro pane Windows. Uye zvakare, zvinodikanwa kuti uone kana iri yekuisirwa pakombuta ine yapfuura operating system kana kwete.
Kana zviri zvekusimba kwandinogona kutaura kubva pane zvakaitika kuti kubvira Windows XP maapplication anopaza haatyise system, Windows nhasi yakatsiga. Padivi reGNU / Linux, kune rimwe divi, isina kugadzikana distros (beta uye versionitis) yakawanda nhasi isingazivikanwe nekusimba kwavo. Kufanana nenzvimbo dzedesktop, senge KDE4 uye Gnome, ivo havana kugadzikana zvakanyanya, kunyangwe hazvo hwaro hweGNU / Linux system iri.
Iyo posvo ndeyekare: | http://www.rinconsolidario.org/linux/win-Lin/win-Lin.html
Zvakanaka, mumaonero angu windows ichave isingachashandi, mumusika uko zvese zvinoenda kune iro gore, muvengi wekare (windows), ichafanirwa kuzvimisikidza pachayo munzvimbo ine linux yanga iri kwenguva yakareba, kuti zviitike zvakafanana neWindows Phone, mumaonero angu iyo yekare proprietary software system iri kurasikirwa neiyo xD kubata, nekuuya kuri kukura kwemafoni nhare, uye zvakanaka Windows isisitimu yekushandisa ine zvinhu zvayo zvidiki, asi Linux iri…. Linux :)
Pindura kuna DanielZ
Zvakanaka, chokwadi chiri kunetsekana nezviri kuitika neLinux zuva nezuva, vanoburitsa akawanda ma distros nezvose, asi rutsigiro rwainarwo kubva kune vashandisi ve pc ishoma kwazvo, zvagara zvakadaro, asi izvozvi zvave zvakaipa, sezvo isu vese vanoziva, mitambo yakakosha zvakanyanya iyo linux yakagara iinayo (ndinoda kutamba yakawanda) uye software, zvakanaka, zvakaoma kune avo vanoshandiswa kumahwindo kuti vachinje ... Salu2.
Mhoro fxbian, ndatenda nekutaura kwako.
Zvinoenderana neizvo iwe zvaunotaura, tarisa yedu yekupedzisira posvo, iyo inotenderera pamutambo wevhidhiyo weLinux:
Linux yakanaka, Microsoft inobva kuna dhiabhori uye unofanirwa kuikunda zvakadaro
Pindura kune antiwindows
Imwe yeapuro iyo inoda kudya xD.
Zvakanaka, kana sarudzo ichienderana newe semunhu, iwe unoda kuedza here? Linux, iwe unoda kuve iye chaiye mukomana uyo anokwenya mabhora ake? Apple uye kana zvisina kukwana iwe, saka Microsoft xD, Kunge zvese muhupenyu sarudzo yesystem inoenderana nezvaunoda kuisa mari uye nezvaunotarisira kuwana.
andreina valentine akadaro
hahahahaha xd n xabn kmntr em um dzinoti weeb
Pindura kuna andreina valentina
tsamba yekushomeka akadaro
hahahahahaha prxzz yakaipa kubva kune xecion e
Pindura kune deysiscarta
naw he chimbo np meterxe in faceee bone
jkajkajkajkajkajka xd lz d 3rd f zn orriblz i el k the knthe ze la kier thirar k extha mz bn i ex mz yakashata kl @ p @ l @ br @
PAURO 15K akadaro
Kubva pane zvandakaverenga peji ino yakanyatsogadzirirwa (LINUX) uye yeiyo software yekuenzanisa. yeruzivo rwandakaverenga vakapa chanse yakawanda kuWindows pane kuLinux
Pindura PABLO 15K
portuguese wrestler akadaro
Pindura Lucho Portuano
MACOMMENTS TOO OLD. NDINODA KUTI VANGA VAKAWEDZERA ZVAKAWANDA….
Pindura kuna HECTOR
Izvo hazvisi chaizvo izvo zvemakore pasina kutangazve, mune linux mint 1 ye4 inogadziridza inoda kutangazve, uye zvechokwadi inoparara. Uye tisingataure dambudziko rinotyisa rekupenya ndangariro uye magungano avo sekuverenga-chete, kana semuridzi wemidzi ... Uye ini ndinojekesa kuti ndanga ndichishandisa linux kwenguva yakareba asi ini ndinongoziva zvekutanga, uye nezvose izvo ini sarudza linux.
Zvemagariro midhiya nhasi